Seranam-piaramanidina eropeana miverina amin'ny habakabaka iraniana sy irak
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina eropeana miverina amin'ny habakabaka iraniana sy irak
Ny vondrona Integrated EU Avatar Security Risk Assessment Group dia nanafoana ny mpanolo-tsainy momba ny sidina noho ny habakabaka Iraniana, ary nilaza fa ny fanapahan-keviny dia tonga iray andro taorian'ny nihaonany mba hanombanana ny vaovao farany mifandraika amin'ny fiarovana sy fiarovana ny fitaterana an'habakabaka any Iran sy Irak.
Vokatry ny fihaonana, ny tolo-kevitra fohy momba ny fisorohana ny safo-drano rehetra any Iràka sy Iran "toy ny fepetra fisorohana dia nesorina", hoy ny vondrona tao anaty fanambarana iray.
The Sampan-draharahan'ny fiarovana ny sidina eropeana (EASA) ary ny Vaomiera Eoropeana dia namoaka ny mpanolotsain'izy ireo taorian'ny nanesoran'i Etazonia ny komandy miaramila jeneraly jeneraly Qassem Soleimani ary i Iran dia namaly tamina fanafihana balafomanga ny toby amerikanina roa tany Irak.
“Fiarovana fiaramanidina” Iraniana koa dia nitifitra a Fiaramanidina mpandeha Okrainiana ivelan'ny Teheran, namono ny olona 176 tao anaty sambo rehetra.
Ny alatsinainy teo dia nilaza ny kaompaniam-pitaterana zotram-piarahamonina holandey KLM fa efa azo antoka ny fandriam-pahalemana any Iran sy Irak.
Ny governemanta britanika sy alemanina koa dia namoaka fampandrenesana ho an'ny airmen (NOTAM), izay nanambara fa afaka misidina soa aman-tsara any Iran sy Iraq ny seranam-piaramanidina ara-barotra.
Seranam-piaramanidina amerikana 10 tsara sy ratsy indrindra ho an'ny mpandeha tara
11 tapitrisa dolara ny vidin'ny valan'aretina virus coronaavirus ao Sina